Open source ecosystem yema drones? | Linux Addicts
Isaac | 21/10/2021 13:13 | Noticias, Resources
Nyika yanhasi haifungidzike pasina drones. Aya marobhoti anobhururuka ave chinhu chinenge chiripo, zvese zvekushandisa zvakavanzika, zvekurekodha, kana zvekushandisa zvechiuto, zviratidziro, zvinokandwa, nezvimwe. Ivo vari kuwedzera uye zvakanyanya kukosha uye zvakanyanya kubatsira zviri kuwanikwa kwavari.
Mumwe wevatambi vakuru munyika ye drones ndeye kambani yeChinese DJI. Iyi kambani yanga ichitonga chikamu ichi kwemakore gumi nemana nekuda kwechisimba mutengo wemitengo uye nehunyanzvi drones. Nekudaro, nekuwedzera kweiyo DJI femu kune yakasviba yeUS Dhipatimendi reCommerce, mamiriro achinja zvakanyanya kukambani iyi. Havasi kungodzivirira kutorwa kwezvikamu munyika ino, asiwo bhizinesi iro chero kambani inogona kuita neDJI, kunyangwe vachingoda kushandisa iyo DJI SDK.
Haisi iyo yega kambani yeChinese yakabatwa, sezvaunoziva Huawei aive mumwe paUS blacklist kubvira 2019.
Ikozvino, yakavhurika sosi ecosystem ye drones iri munzira yekuzvimisa seye indasitiri chiyero. Kubva payakavambwa muna 2011, PX4 yave nzira yakavhurika sosi yekudzora ndege inonyanya kushandiswa nendege dzinozvimiririra. Uye ine nharaunda yakakura yebudiriro, kusanganisira Kushusha semupi wepamusoro uye 600 mamwe, kusanganisira mamwe epasi rose makuru emuchadenga uye makambani ekudhiraivha.
PX4 ichava nemabhenefiti maviri chikuru:
Kune rimwe divi, inorerutsa zvakanyanya drones dzinobhururuka uye dzinoita kuti dzive dzakachengeteka zvakanyanya. Iyo software inobvumira kuzvimiririra kusimuka uye kumhara uye nekuzvimiririra kutevera zvinhu.
Iyo software yakagadzirwa neboka repasi rose revagadziri pasi pehutungamiriri hweETH Zurich PhD mudzidzi Lorenz Meier, Pixhawk muvambi weprojekiti uye anotungamira mugadziri wePX4. Izvo chaizvo zviri muETH Zurich uko ino yakavhurika-sosi ecosystem ye drones ine mbeu yayo. Izvo zvinoshamisa tichifunga nezvemukurumbira weEuropean institution. Uye zvakare, ivo vazhinji vanopa vakaita kodhi iyo yaizotora makore kugadzirira nekukurumidza.
Mamwe mashoko - PX4
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Vhura sosi ecosystem yedrones?